USimona-Thandazela Uxolo-Ukubuyela eBukumkanini
Inenekazi lethu leZaro ukuba	Simona NgoJanuwari 8th, 2021:
Ndabona uMama: wayenxibe zonke ezimhlophe, entloko wayenekhuselo elithambileyo nesithsaba seenkwenkwezi ezilishumi elinambini, emagxeni akhe ingubo enkulu eblowu, esinqeni sakhe ibhanti legolide. Umama wayevule iingalo zakhe ebonisa ukuba wamkelekile; Kwisandla sakhe sasekunene wayenerosari ende eyenziwe ngokukhanya. Iinyawo zakhe zazize kwaye ziphumle emhlabeni. Makabongwe uYesu Kristu.
Bantwana bam abathandekayo, ukunibona apha kwihlathi lam elisikelelweyo kuyigcwalisa intliziyo yam ngovuyo. Yabonani, bantwana, ndiza kuni njengoMama woXolo, olo xolo kufuneka luhlale ezintliziyweni zenu; kodwa oku akunakwenzeka ukuba awuyivuli iminyango yeentliziyo zakho kuKrestu, bantwana - olo Xolo kufuneka lukhokele zonke izenzo zakho, olo Xolo kufuneka lukhanye kuwe. Thandazani bantwana bam uxolo, uxolo kwiCawe yam endiyithandayo, uxolo lweli hlabathi olonakalisiweyo, uxolo olusemngciphekweni. Bantwana bam, thandazani; Ngamana uxolo nothando lukaKristu lungahlala kuni. Bantwana, thandazani, amaxesha anzima alindele nina, thandazani ngekamva leli hlabathi. Thandazani, bantwana bam, thandazani. Ndiza kuwe ndicela umthandazo. Bantwana, ndiyanithanda, anditsho ukuba ndiyothuse, kodwa ndiyanilumkisa, niyanilumkisa, niqonde, ndinixelele ukuba umthandazo sisixhobo esinamandla sokulwa nobubi. Bantwana, ncedani nithandaze- ndiyanithanda. Ngoku ndikunika intsikelelo yam engcwele. Enkosi ngokungxama ukuza kum.
← Luz de Maria -…
Ukuzama ukucoca →